Kani waa maqaal ku saabsan biyaha badweynta Hindiya ee badaha dhulka. Qaab adeegsi kale, eeg Badweynta Hindiya (faah faahin).
w:es:indian oceanw:tr:Hint altkıtasıw:it:Oceano IndianoBadweynta Hindiya (Af-Ingiriis: Indian Ocean; Af-Carabi: المحيط الهندي) waa badweynta sadexaad ee ugu wayn aduunka taasi oo dhacda bariga qaarada Afrika, koonfurta Aasiya ilaa galbeedka Badweynta Atlaantik. Badweynta Hindiya waxay ka mid tahay baddaha aduunka ugu waaweyn waxaayna u dhaxeysaa qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Ustareliya. Baaxada Badweynta Hindiya waxaa lagu qiyaasaa 73.481.000 km². Waxay ku xirantahay waqooyiga-galbeed, Marinka Gardafuul.Xudduudaha Badweynta Hindiya, oo ay soo diyaarisay Ururka Caalamiga ah ee Hormarinta Caalamiga ah 1953-kii, waxaa ka mid ahaa Badweynta Koonfureed laakiin maaha badaha xeebaha ee waqooyiga woqooyiga, laakiin sannadkii 2000 ayaa IHO waxay gooni u goosatay Badweynta Koonfureed si gooni ah, taas oo soo saartay biyaha koonfurta of 60 ° S badweynta Hindiya, laakiin waxay ku jireen xeebaha badweynta waqooyiga.  Meridionally, Badweynta Hindiya waxaa laga soo xigtay Badweynta Atlantic by 20 ° bariga Meridian, koonfurta koonfurta Cape Agulhas, iyo Badbaadada Baasifiga by meridian of 146 ° 55'E, koonfurta ka soo xigta koonfurta ugu fog ee Tasmania. Inta u dhaxaysa waqooyiga badweynta Badweynta Hindiya qiyaastii 30 ° waqooyiga Gacanka Ciraaq.
Xaafadaha badda ee badweynta ayaa ah cidhiidhi, oo qiyaastii 200 kiilomitir (120 md) ballaaran. Marka laga reebo waxaa laga helaa xeebta galbeed ee Australia, halkaas oo xajmiga shinninku uu ka badanyahay 1,000 kiiloomitir (620 mi). Celceliska qoto dheer ee baddaha waa 3,890 m (12,762 ft). Mawduuca ugu sarreeya waa Diamantina Deep in Diamantina Trench, 8,047 m (26,401 ft) oo qoto dheer; Sunda Trench waxay leedahay qoto dheer oo ah 7,258-7,725 m (23,812-25,344 ft). Waqooyiga 50 ° ee koonfurta, 83% ee basin weyn ayaa daboolaya saameeyaha pelagic, kuwaas oo in ka badan kala badh uu yahay globigerina. Qeybta 14% ee ku hartay waxaa lagu dhajiyay qulqulka dhulalka. Dhaqdhaqaaqa maskaxdu waxay ku badan yihiin dhul-beereedka koonfureed.
Biyaha Badweynta Hindiya ayaa furay aagagga xuduudaha u ah ganacsiga ka hor inta aaney Atlantic ama Pacific Ocean. Meelaha xoogga leh ayaa sidoo kale loola jeeday maraakiibta si sahal ah u dhoofi kara galbeedka horraantii xilliga xagaaga, ka dibna dhowr bilood sug oo soo noqo bari. Tani waxay u oggolaatay dadyowga reer Indonesia in ay ka gudbaan